Waa maxay antivirus-ka khadka tooska ah ee bilaashka ah ee kombiyuutarka ee shaqeeya? | Wararka Gadget
Fayrasyada, oo ka baqay cadawga qalab kasta oo leh nidaam hawlgal, laakiin leh xusuus gaar ah Windows inkasta oo aanu jirin nidaam ka reebban Trojans-kan. Markaan iibsaneyno kumbuyuutar waxaan kaliya ka fekereynaa daalacashada, ciyaarida, soo degsashada waxyaabaha ama shaqeynta, waxaan u maleyneynaa in kumbiyuutarka uusan u baahneyn barnaamijyo ilaalin oo si sax ah u shaqeynaya waana sida oo kale markii hore.
Waqtiga qaar iyo soo dejin badan kadib waa marka aan bilaabi karno inaan aragno dhibaatooyinka kombuyuutarka, dhammaan soo dejinta aan la xakameynin, booqashooyinka dhammaan noocyada bogagga iyo caado fudud ee la adeegsado shaashadda ka soo gudubtay kombiyuutarro kale oo badan waxay u horseedi kartaa kombuyuutarkaaga dhammaan fasal faylal xaasidnimo ah oo awood u leh inuu miisaamo kumbuyuutarkaaga si uu uga dhigo mid aan waxtar lahayn. Laakiin dhibaatadu ma aha oo kaliya luminta waxqabadka, sidoo kale waxaa suuragal ah inaan faylashayada ama xogta shaqsiyadeed u helno dhinacyada saddexaad ee naga xadi kara macluumaad muhiim ah. Aan aragno kuwa ugu fiican ee aan ka heli karno gebi ahaanba bilaash.
1 Ma fiican tahay in la bixiyo ama la isticmaalo ikhtiyaar ikhtiyaari ah?
2 Avast Bilaash ah oo Bilaasha ah
3 Antibiyootigga bilaashka ah ee AVG
4 Kaspersky Antivirus Bilaash
6 Antivirus-ka bilaashka ah ee Panda
7 Maxaad ugu isticmaali kartaa mid ka mid ah kuwaan halkii aad ka isticmaali lahayd Windows Defender?
Ma fiican tahay in la bixiyo ama la isticmaalo ikhtiyaar ikhtiyaari ah?
Dhammaantood waxay ku yimaadaan xog-ururin aad u weyn, oo shirkadaha ka dambeeya barnaamijyadan ay si joogto ah u cusbooneysiiyaan si loo ilaaliyo dhammaan hanjabaadaha furin ee laga yaabo inay ku dhacaan kooxdeena. Sidan oo kale, si kasta oo uu virusku cusub yahay, fayraskeenu wuxuu awoodi doonaa inuu wax ka qabto.
Laakiin sidoo kale waxtarka antivirus-kan ka dhanka ah khayaanada waa muhiim, ama saameynta ay ku leedahay waxqabadka kumbuyuutarradeena, maaddaama qaar ka mid ah barnaamijyadan ay dib u dhigi karaan nidaamkeenna wax badan sababo la xiriira isticmaalka badan ee kheyraadka ay ku sameyso asalka. Waa inaan sidoo kale tixgelino sahlanaanta isticmaalka ama sida dareenku u yahay is-dhexgalkiisu.
In macnaha this antibiyootiko bilaash ah ayaa kula tartamaya shuruudo la mid ah dhigooda lacagta la siiyo, gaaritaanka waxtarka isku midka ah ee kahortaga fayrasyada iyo dhibcaha waxqabadka iyo isticmaalka ugufiican.
Farqiga waxaa sameeyay xulashooyinka dheeriga ah iyo kuwa horumarsan ee aan ka raadin karno shirkadaha, laakiin si shaqsi ahaaneed uma ogaan doonno wax farqi ah jeebka mooyee.
Avast Bilaash ah oo Bilaasha ah
Waxaan ku bilownay xoog leh waxa loo arko inuu yahay boqorka antivirus bilaash ah, weligeed kama maqnaan karo liiska antivirus bilaash ah ee ugu fiican suuqa. Barnaamij, sida ay sheegeen khubarada ku xeel dheer arrimahaas, wuxuu bixiyaa ugu badnaan xagga amniga, halka ugu sarreysa kuwa kale ee la bixiyo iyo wixii ka sarreeya fursado kale oo badan. Intaas waxaa sii dheer, waxay heshaa natiijooyinka ugu fiican marka la eego adeegsiga, waana sababta ay u tahay barnaamij wax ku ool ah.
Haddii aan ku darno tan in ay fududahay in la maareeyo, la habeeyo lana fahmo markii digniinta halista suurtagalka ah ay dhacdo iyo in waxaas oo dhami ay ku keenayaan saamaynta ugu yar ee suurtogalka ah waxqabadka kombuyuutarkayaga. Tani shaki la'aan wuxuu Avast ka dhigayaa antivirus-ka ugu fiican ee suurtogalka ah ee kombiyuutarkayaga, laakiin si aysan u noqonin wax yar waxaan siin doonnaa fursado badan maxaa yeelay kuwa kale waxay u muuqan karaan kuwo ka fiican ama ka qurux badan.
Antibiyootigga bilaashka ah ee AVG
AVG waxay leedahay nooc bilaash ah laakiin sidoo kale mid la bixiyay. Ikhtiyaarka bilaashka ah wuxuu leeyahay falanqaynta furin ee dhammaan noocyada, cusbooneysiinta waqtiga-dhabta ah, xannibaadda isku xirka, soo dejinta iyo waliba falanqaynta waxqabadka kooxdeena.
Way ka xaddidan tahay nooca la bixiyay, laakiin heerka amniga way isku mid yihiin, waana sababta ay u adag tahay in lagala taliyo lacagteeda. Heer nabadgelyo oo aan la dhaafi karin sida ay qabaan khubaro badan, iyadoo si fudud loo isticmaalayo loona qaabeynayo sida soojiidashada waaweyn iyo iyadoo aan si dhib leh loo hor istaagin waxqabadka qalabkeena.
Kaspersky Antivirus Bilaash
Sida kuwa kale, waxaan haynaa nooc lacag bixin ah iyo nooc bilaash ah, nooca bilaashka ah kama walwal doonno waxqabadka qasaaraha ee suurtogalka ah sababtoo ah isticmaalka xad dhaafka ah ee kheyraadka, maadaama saameynta ay tahay mid aan waxba galabsan
Barnaamijkani wuxuu naga siinayaa difaac guud nooc kasta oo khayaano ah wuxuuna leeyahay qalab ilaalin gaar ah oo loogu talagalay macluumaadkeena ugu muhiimsan. In kasta oo aysan ahayn tan ugu fiican ee antibiyootigga bilaashka ah ee aan hayno, nooca ay bixisay ayaa ka mid ah kuwa ugu fiican ee suurtogalka ah ee antivirus lagu bixiyo.
Ikhtiyaar aad ufiican oo loogu talagalay dadka isticmaala raadinaya iskaanka antivirus-ka kaas oo aan adkeynayn waxyaabaha kadib rakibida. Waxaa loogu talagalay inay si buuxda ugu shaqeyso asalka, kaliya waxay na tusi doontaa ogeysiisyo muhiim ah haddii ay dhacdo nooc ka mid ah waxqabadka shakiga leh. Falanqaynta, ogaanshaha iyo ka saarista khayaanada waxaa si toos ah loogu sameeyaa.
Sawir-qaadaha ayaa runtii ah mid dhakhso badan, maareeya si loo farsameeyo dhammaan faylasha iyo fayllada daqiiqado yar uun ka dib bilowga. Waxay leedahay shaqooyinka kahortaga khayaanada iyo kahortaga phishing, iyaga ayaa calaamadeeya oo kugu wargaliya isla marka ay ogaato inay ka hortagto xatooyada xogta. Haddii aad raadineyso sawir-qaade wanaagsan oo asal ah oo aan dhibaatooyin lahayn, ikhtiyaarkan ayaa hubaal ah inuu ka mid noqdo kuwa aad ugu cadcad.
Antivirus-ka bilaashka ah ee Panda
Xulashada qaranku kama maqnaan karin liiskan, waa shirkad Isbaanish ah oo fadhigeedu yahay Bilbao iyo Madrid. Intaas waxaa sii dheer, waxay heshaa mid ka mid ah tikniyoolajiyadaha ugu badan ee la bixiyo qaybta.
Waxay caan ku tahay fududaanta adeegsiga, isku xirnaanta, iyo naqshad gaar ah. Laakiin sababta ugu weyn waxay ka timaadaa shabakadeeda gaarka loo leeyahay (VPN). VPN wuxuu ku shaqeeyaa adoo u gudbinaya isku xirkaaga internetka adeege aamin ah. Dhammaan xogta soo gasha ama ka baxda kombuyuutarkaaga waxay ku jiraan crypt, taas wuxuu ka celinayaa Trojans inay soo galaan taraafikadaada internetka. Heerkan amniga ah ayaa si weyn loogu taliyay haddii aan isticmaalno shabakadaha internetka ee dadweynaha.
Iyadoo shabakadda VPN ee panda waa lacag la’aan, laakiin waxay ku egtahay 150MB maalintii. Markaa waxay noo adeegi doontaa oo keliya inaan dhex mushaaxno oo adeegsanno boostada. Haddii waxa aan dooneyno ay naga ilaalinayaan soo dejinta, waa inaan tagnaa nooca ay lacagta ku bixisay.
Maxaad ugu isticmaali kartaa mid ka mid ah kuwaan halkii aad ka isticmaali lahayd Windows Defender?
Difaaca Windows guud ahaan xisaabinta waa shey aad ugu wanaagsan baahiyaha aasaasiga ah, waxay ogaan doontaa khayaanada waxayna naga difaaci doontaa sida barnaamijyada kale sameeyaan. Laakiin kama bixinayso difaac noocyo kale oo badan oo hanjabaado ah sida madax furasho ama khiyaano.
Ikhtiyaarro badan oo bilaash ah, xitaa qaar aan ka muuqan liiska sida Avira ayaa naga difaaci doona wax kasta oo uu Difaaca difaaco iyo kuwa kale oo badan oo aan ilaalin. Marka waa wax aan waxba ka wanaagsaneyn, dabcan, laakiin kuma talinayo inaan amnigeenna gacmahaaga ku dhaafno.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Software » Waa maxay antivirus-ka khadka tooska ah ee bilaashka ah ee kombuyutarka shaqeeya?